Oprah Winfrey na Prince Harry wetara ahụike ọgụgụ isi na Apple TV + na mbubreyo Mee | Esi m mac
Oprah Winfrey na Prince Harry wetara Apple TV + ahụike na ngwụcha May
Ekwuputara na 2019 site na Instagram na mgbe emechara oge mmepụta ihe ga-emesị ikuku na Apple TV + na Mee. Nkwenye a gosipụtara n'oge mkparịta ụka nke Oprah na The Drew Barrymore Show. Ọ bụghị naanị mmepụta ka eyigharịrị n'ihi ọrịa a, mana ọ bụ eziokwu na inwe mmalite nke nso, ọtụtụ ihe na-abata n'uche, ọkachasị ọnọdụ Príncipe ugbu a nke ọbụlagodi na anyị nwere ike ịkọwa dịka mgbasa ozi.
Na Eprel 2019, mmekorita nke Prince Harry na Oprah na Apple TV + iji mepụta usoro banyere ihere nke nsogbu ahụike uche. Ọ bụ ndị isi kwupụtara usoro a site na akaụntụ Instagram ha, usoro nyocha nke ga-edozi nsogbu ahụike ọgụgụ isi gburugburu ụwa, ọ bụghị naanị na United Kingdom. N'ajụjụ ọnụ emere na Drew Barrymore Show na Oprah, o gosipụtara na mmalite ga-abụ na njedebe nke Mee.
Usoro ihe omimi di iche-iche di omimi ga-eleba anya na oria uche na aru isi ike. Ọ ga-agba mbọ ime ka ndị na-ekiri ha nwee ezigbo mkparịta ụka gbasara ihe ịma aka anyị na-eche ihu. Karịsịa, olee otu iji kwadebe onwe anyị na ngwaọrụ iji ghara ịdị ndụ naanị, mana ka na-eto nke ọma.
Ọ dị mma na mmalite nke usoro a na - eme n'oge a na - atụ anya ya. N’iburu n’uche na oria ojoo a ewetaghị naanị ahụike na akụ na ụba, kamakwa nke na-elekọta mmadụ. Kọntaktị n'etiti ndị mmadụ belatara na nke a na-eme ka ndị ọkachamara ahụike ọgụgụ isi na-abawanye.
Anyị ga-echere na ngwụcha ọnwa Mee iji hụ ka usoro a si esochi onye isi mgbasa ozi na Oprah dị ọtụtụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple TV » Oprah Winfrey na Prince Harry wetara Apple TV + ahụike na ngwụcha May
MacOS Big Sur 11.4 nke abụọ beta maka ndị mmepe